Nagu saabsan - Yixing City Jitai Electronics Co., Ltd.
Habka Xakamaynta Tayada ee Jitai
Laga soo bilaabo markabkii alaabada ceeriin ilaa daqiiqada ay alaabteenu ku yimaadaan gacanta macaamiisheenna, Jitai waxay shaqaalaysaa nidaam is dulsaaran oo hubin tayo leh iyo habab lagu xakameeyo tayada oo hubineysa in badeecadeenu gaarsiisan tahay heerarka saxda ah ee warshadaha xirmooyinka hermetic.
Doonta Alaabta ceeriin
Kormeerka Qalabka Ceyrinta
Hubinta tayada ayaa bilaabmaysa ka hor intaan alaabta ceyriin xitaa la keydin. Marxaladda habka muunad qaadista aqbalaadda, agabyada ayaa si aan kala sooc lahayn loogu xushay kormeerka tayada (ka dib markaa go'aan laga gaarayo in la raacayo rarka), haddii go'aanka noocan oo kale ah la gaaro dhammaan rarka waa la nadiifinayaa, kormeer buuxa ayaa la sameeyaa, cilladaha yar yar waa la kaydiyaa oo la safeeyaa, keydkuna markaa waa la kaydiyaa.
Kulan iyo Brazing
Baadhitaanka Muuqaalka oo Dhameystiran iyo Tijaabada Hermeticity-ka Koowaad
Ka dib isku imaatinka bilowga ah iyo marxaladaha kala-soocida, badeecad kastaa waxay maraysaa kormeer muuqaal oo shaqsi ah oo ay ku xigto baaritaan hordhac ah oo hidde ahaan.
Daboolka baaritaanka shahaadada isku xidhka.
Baadhitaanka alaabta la dhammeeyay
Baadhitaan badeecadeed oo buuxa oo ay kujirto hubinta muuqaalka, dhismaha, dhumucda dahaadhka, iyo baaritaanka helikasta gaasolka labaad.
Tijaabinta daalka daalka, tijaabada milixda buufinta caabbinta iyo qalabka jilitaanka cimilada ee tijaabiya wax soo saarka
Dhammaan alaabooyinka ayaa si shaqsi ahaan faaruq ah u buuxan oo leh suntan wax baabi'isa ee sunta ka-saareysa, ka dibna ku duuban lakab duuban oo xumbo leh. Dadaalladaasi waxay dammaanad ka qaadayaan in badeecad kasta oo Jitai ah oo laguu soo gudbiyo ay tayo ahaan aad u sarreyso sidii ay uga baxday warshaddii.